openELEC: wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato xaruntan multimedia | Qalabka bilaashka ah
OpenELEC Waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee loo yaqaan 'GNU / Linux qaybinta' oo diiradda lagu saaray hirgelinta xarun warbaahineed oo dhammaystiran. Waxaa si gaar ah loogu talagalay HTPCs (Tiyaatarka Guriga ee Kombiyuutarka Shakhsiyeed), taasi waa, loogu talagalay miniPC-yada loogu talagalay madadaalo badan oo qolkaaga ah.
Intaa waxaa sii dheer, OpenELEC, sida nidaamyada kale ee la midka ah, sidoo kale waxaa lagu rakibi karaa SD-ka SBC-yada sida Raspberry Pihaysashada xarun warbaahin raqiis ah iyo wax kasta oo aad uga baahan tahay TV-ga qolkaaga ... Markaa haddaadan ka warqabin, hadda waxaad ku dari kartaa OpenELEC liiska nidaamyada hawlgalka ee Raspberry Pi.
1 Waa maxay xarunta warbaahinta badan?
2 Ku saabsan OpenELEC
3 Ku rakib Raspberry Pi
Waa maxay xarunta warbaahinta badan?
Un xarunta warbaahinta badan, ama xarunta warbaahinta, asal ahaan waa hirgelin aad ku raaxeysan karto dhammaan noocyada maaddooyinka badan. Taasi waxay muujineysaa ciyaarista muusikada, filimada, muujinta sawirada qolalka, marin u helka internetka, iyo xitaa adeegsiga howlaha kale iyada oo loo sii kordhinayo waxyaabaha lagu daro (kanaalada TV-ga, raadiyaha,…).
Xarumahan warbaahineed ee badan ayaa asal ahaan ah nidaamyada hawlgalka oo dhammaystiran oo leh softiweer ay ku fulin karaan howlahaas oo dhan, marka lagu daro darawalada loo baahan yahay iyo koodhadhka.
Xarunta Microsoft Windows Media Center Waxay ahayd mid ka mid ah nidaamyadii ugu horreeyay ee noocan ah ee caan noqda, in kasta oo aan si weyn loo aqbalin waqtigaas, waxay aasaas u ahaan lahayd nidaamyada hadda jira, gaar ahaan hirgelinta maanta ka jirta qalabka fiidiyowga, iyo sidoo kale mashaariicda dhererka Kodi, LibreELEC, OSMC, ama OpenELEC lafteeda ...
Ku saabsan OpenELEC
OpenELEC waa nidaam ku shaqeeya Linux gundhig u ah madadaalada dhijitaalka ah. Gaabinta ereygu wuxuu ka yimid Open Embedded Linux Entertainment Center. Intaa waxaa dheer, distoorkan yar wuxuu raacayaa mabda'a JeOS (Just Enough Operating System), taas oo ah, nidaam hawlgal oo aad u yar oo kaliya leh waxa kaliya oo lagama maarmaan u ah ujeedka loo abuuray.
Barxadani kuma salaysna mid kale, laakiin waxaa laga abuuray meel hoose iyo kuwa caanka ah Isku-dhafan Kodi, wax caadi u ah barmaamijyo kale oo badan oo la mid ah OpenELEC. Taasna ma ahan inay ka yar tahay kuwa kale, dhab ahaantii waxaa lagu abaalmariyay faa'iidooyinkeeda ...
Hadaad isweydiiso maxaad sameyn kartaa OpenLEC, runtu waxay tahay in shaqooyinka soo socdaa ay istaagaan:
Leh a video player iyo qabanqaabiyaha soo-saarista iyo filimada aad ku haysato warbaahinta aad ka heli karto. Intaa waxaa dheer, waxay kuu ogolaaneysaa inaad doorato subtitles, aad soo bandhigto macluumaad fiidiyoow ah, iyo inaad sameysid goobo kale oo aasaasi ah.
Waxay kaloo leedahay a maareeyaha TV-ga, si aad had iyo jeer uga ilaaliso dhacdooyinka aad ugu jeceshahay meel la gaari karo, arag sharraxaadooda, noocyadooda, jilayaasha, iyo macluumaadka kale ee laga helo internetka.
Sawir gacmeed isku dhafan si aad u aragto sawirada aad keydisay oo aad ku qori karto maktabadaha sidaad doorbideyso. Waxay leedahay shaqooyin si aad u aragto mid mid, qaabka slide, zoom, rotation, iwm.
Dabcan wuu qirayaa ciyaaro faylasha codka, oo leh maamuleyaal heesaha aad ugu jeceshahay, buugaag maqal ah, iwm. Waxay ku qori karaan albumka, farshaxanka, iwm.
Haddii aad u baahato, way muujin kartaa Kanaallada TV-ga iyo waliba fiidiyow duub si aad u keydiso bandhigyada aad ugu jeceshahay una daawato markasta oo aad rabto.
dheeraad ah: OpenELEC sidoo kale waxay leedahay nidaam horumarsan oo lagu balaarinayo awoodeeda iyadoo lagu rakibayo addons. Iyaga waxaad ku dari kartaa kanaalo, shaqooyinka otomatiga guriga, qalab hawlo faro badan, maqaarro cusub ama mawduucyo, iwm.
Macluumaad dheeraad ah - Websaydhka Rasmiga ah ee OpenELEC
Ku rakib Raspberry Pi
Haddii aad rabto rakib OpenELEC on your Raspberry Pi (iyo qalab kale), habka loo sameeyo waa wax iska fudud. Kaliya waa inaad raacdaa talaabooyin fudud oo fudud:
Marka hore waa inaad soo degso sawirka si loo rakibo OpenELEC. Waa inaad ka sameysaa bogga rasmiga ah, ee ku jira aagga soo dejinta.
Markaad halkaas tagto waxaad kala dooran kartaa faylasha .tar ee leh cusboonaysiinta si aad ugalaabato hal nooc mid kale haddii aad haddaba leedahay OpenELEC, ama .img faylasha oo ah sawir dhammaystiran oo lagu rakibo markii ugu horreysay. Xullo barta aad rabto inaad ku dejiso sawirka, sida Raspberry Pi, Freescale i.MX ama Generic (oo loogu talagalay x86-64 PC), oo soo dejiso .img.tar oo ka yimid nooca xasilloon ee ugu dambeeyay. Si tan loo sameeyo, kaliya dhagsii badhanka Sawirka Muuqaalka ee muuqda oo sug inta uu dhammaystirayo.
Hadda, kombiyuutarka aad ka soo degsatay, waa inaad ku qasabtaa abuur dhexdhexaad ah OpenELEC barnaamijka rakibida, sida usha USB, ama kaarka SD, ugu yaraan 256MB ama ka sareeya. Si tan loo sameeyo waxaad isticmaali kartaa barnaamijka Etcher.
Markaad iftiimiso kaarka SD, waxaad ku ridi kartaa booska Raspberry Pi oo samee kabaha ugu horeeya. Dhexdeeda, waxay ku weydiin doontaa inaad qaabeysid cabbiro qaarkood sida luqadda, waqtiga, iwm. Markaad ku dhameysato saaxirka, waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxeysato OpenELEC buuxda.
Xusuusnow in haddii aad ku rakibayso kombuyuutar, markaa waa inaad doorataa ikhtiyaarka qaybta Boot ee BIOS / UEFI si aad uga soo dhex gasho dhexdhexaadinta aad abuurtay, xaaladdan oo ah USB ...
Hada waad ku raaxeysan kartaa dhammaan waxyaabaha aad ka rabto warbaahinta badan ee 'OpenELEC' ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Raspberry Pi » openELEC: wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato xaruuntaan badan ee warbaahinta
Mitirka VU: waa maxay iyo sidee qalabkan loogu isticmaali karaa